Somaliland oo lagu Amaanay Doorashooyinka ay u Jihaysatay. |
Somaliland oo lagu Amaanay Doorashooyinka ay u Jihaysatay.
Hargeisa(GNN):-Jamhuuriyadda Somaliland ayaa u jihaysatay dhinaca doorashooyinka, waxana ay 31-ka Bisha May ee sannadkan ka qabsoomaya doorashooyinkii u horreeyey ee isku sidkan ee Goleyaasha Wakiillada iyo Deegaanka.
Shacbiga Somaliland ayaa baraha bulshada kaga dareen-celiyey dedaalka loogu jiro qabsoomid doorashada, iyadoo Komishanka Doorashooyinku ay soo saareen tirada guud ee dadka lagu wado inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka soo socda oo tiradoodu tahay 1,297,838 oo qof. Halka doorashooyinku ay ka qabsoomayaan 1, 642 goobood oo ku kala yaalla 23 degmo doorasho.
Ra’yul-caamka bulshada ayaa aaminsan in doorashooyinka oo si nabadgelyo ah inoogu qabsoomaa ay guul u tahay hannaanka dimuqraadiyadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan Madaxweyne Muuse Biixi oo juhdi geliyey sidii mar loo wada qaban lahaa doorashooyinkii dhaqaalaha badani dalka kaga bixi jiray.
Suxufiga caalamiga ah ee Raage Oomaar ayaa Bartiisa Twitterka kaga hadlay doorashooyinka Somaliland, waxaanu sheegay in Xukuumadda Somaliland ay heshiis la gashay xisbiyada mucaaridka iyadoo aan wax farogelin ah aanay ku lahayn beesha caalamku.
Waxa kaloo uu Raage Oomaar ku amaanay Somaliland in xukuumaddu ay maalgelisay dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka.
Sidoo kale, Doorashooyinka Somaliland ayaa farriin cad u ah farqiga u dhexeeya Somaliland oo dimuqraadiyadeedu jiridaysatay iyo Soomaaliya oo ku guuldaraysatay isku-dayadeedii la xidhiidhay inay gasho doorasho, taasi oo sida xunbada u soo gudhay islamarkaana uu Madaxweyne Farmaajo Baarlamaanka ka ansaxday muddo kordhin 2 sannadood ah oo ay ka horyimaadeen murrashaxiintii la loolamaysa iyo qaar ka mid ah Maamul-goboleedyada ka jira dalkaas colaaduhu ragaadiyeen.